Olona… olana ifotony - ewa.mg
News - Olona… olana ifotony
Tsy misy ny
hoe distrika hadino amin’ny fampandrosoana? Arahaba soa, arahaba
tsara. Amin’izao, mandeha ny fanorenana fotodrafitrasa fototra.
Tena misy na hisy ny fisitrahan’ny vahoaka ifotony hopitaly
manara-penitra, sekoly manara-penitra, kianja manara-penitra… Misy
ny efa vita, ao ny an-dalam-panaovana; ny hafa, kasaina hatao.
Ao anatin’izany rehetra izany, misy
ny olana fototra mbola mahazo sy mampikaikaika ny vahoaka ifotony
amin’ny faritra sasany: tsy fandriampahalemana noho ny asan-dahalo,
ady tany amin’ny setrasetran’ny manana sy ny matanjaka… Misy
an-taona maro ny fizakana ny mafy sy mangidy ny amin’izany, efa
Eo koa ny olana efa ho lava amin’ny
famatsian-drano miverimberina, ny tsy fampian-tsakafo… Ao ny
fahasahiranana amin’ny fifampitondrana eny anivon’ny
vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy vitan’izany, misy aza ny
efa fizakana fahoriana fa tsy fahasahiranana fotsiny ny amin’ny
fitantanana orinasam-panjakana, ohatra.
Ny mahavalalanina amin’izany
rehetra izany ka mampanontany tena izay mahalala: tsy maharaka ve
ny fitondrana? Na tsy misy ny tatitra miakatra; eny, na efa
an-taona maro aza, ohatra, ny fitarainana. Amin’izany, dingan-dava
ny antsoantso vonjy: any amin’ny fitondrana foibe avy hatrany.
Afa-nenina amin’ny isan’ambaratonga ifotony?
Tena misy tsy fantatra na odian-tsy
fantatra amin’ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Na misy tsy
ahafaha-manoatra, na tratran’ny antsonjay… Vokany: saika tsy
fantatra, tsy hita sy tsy re, izay tena olana mahazo ny vahoaka
raha tsy misy ny fitsidihana ifotony. Iza no tsy mahalala na tsy
mahay na tsy manao ny asany amin’izany?
Misy antony ao… Tsy
mampanongon-tena ny tomponandraikitra isan’ambaratonga sy
isan-tsehatra ve, ohatra, ny fampiakarana fitarainana sy antso
vonjy any amin’ny fitondrana foibe avy hatrany ny sasany? Na olona
no olana ifotony… Mbola mety misy ny tsy re na tsy hita amin’izay
tena fahasahiranana sy fahoriana mahazo ny mponina? Na hadino…
L’article Olona… olana ifotony a été récupéré chez Newsmada.
Barea de Madagascar: nosoloina an’i Lôlôdy i Theodin
Niova indray ny lisitry ny mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar. Nampahafantarin’ny klioba Fosa Jr, omaly talata, fa noho ny fahatapahan’ny “clavicule”, tsy afaka hiakatra kianja mandritra ny volana vitsivitsy i Theodin. Faharatrana azony ny alahady lasa teo, nandritra ny fifanintsanana niadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Orange pro league”, nikatrohan’ny Fosa Jr sy ny Cosfa.Araka izany, tsy ho afaka hanatevina ny ekipam-pirenena ny tovolahy amin’ny fiatrehana ireo lalao roa, fifanintsanana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2022).Vokatr’izay, voatery nosoloin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, izy ka nantsoina haka ny toerany i Marobe Jean-Claude (Lôlôdy), mpilalaon’ny Fosa Jr Boeny ihany. Lôlôdy izany no handeha ho any Etiopia hiaraka amin’ny Barea, ny 24 marsa ho avy izao, sy hidona amin’i Niger, ny 30 marsa 2021 any Toamasina.Marihina fa vodilaharana ny toerana hisy an’i Lôlôdy, ao amin’ny Barea de Madagascar. Ny fiarovantena izay efa banga noho ny tsy fahafahan’i Fontaine milalao. Tompondaka L’article Barea de Madagascar: nosoloina an’i Lôlôdy i Theodin a été récupéré chez Newsmada.
Hanomezana diplaoma manokana: tontosa ny CEPE andrana katolika
Nanatontosa ny CEPE andrana, omaly tontolo andro ny sekoly katolika manerana ny Nosy araka ny toromariky ny sampandraharaha misahana ny fampianarana ho an’ny fiangonana katolika (Dinec) izay nivory tany Toliara farany teo. Enina ny distrika mandrafitra ny Vikaria afovoany eto Antananarivo. Samy nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fanadinana CEPE andrana avokoa izy ireo, omaly tontolo ny andro. Ho an’ny teny amin’ny distrikan’i Mahamasina, nandeha tsara ny fanadinana CEPE andrana. Nisy ihany anefa ny ankizy vitsivitsy nanadino ny taratasy fiantsoana, 10 ireo mpiadina tsy tonga tamin’ny 1034 ao amin’ny kilasy 7ème. Vonona ny mpiadina, efa niomana koa ny ray aman-dreny satria tonga maro nanotrona ny zanany. Tonga daholo ny mpanabe, araka ny lamina efa napetraka. Taranja sivy, mihoatra roa amin’ny CEPE mahazatra no nanadinana ny ankizy, omaly. Sekoly 12 no mandrafitra ny distrikan’i Mahamasina; Saint Michel, Sainte Famille, Providence, Sainte Chantale hatrany amin’ny sekoly katolika eny Anosibe, Anosizato, Antangaina, Ankazoto. Ankoatra eny Mahamasina, tafiditra ao anatin’ny Vikaria afovoany koa ny Mangasoavina, Isotry, Andohalo, Faravohitra ary Antanimena, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Vikaria afovoany momba ny fanabeazana, Razafimahatratra Rakotovao Jean Emile, omaly teny Amparibe.Mizara isaky ny distrika ny fanantanterahana ka ireo sekoly fito ao anatin’ny distrikan’Antanimena nanao ny fanadinana andrana teny amin’ny lycée Notre dame de rosaire Antohomadinika. Mitovy amin’ny fizotry ny CEPE karakarain’ny fanjakana ihany ny andrana ary tokana ny laza adina ho an’ny taranja rehetra. Mampiavaka azy fotsiny ny éducation à la vie et à l’amour (EVA)sy ny fandalinam-pinoana amin’ny maha sekolim-pinoana azy ireo, hoy ny fanazavan’ny mpikarakara. Nilamina ny zava-drehetra ary nozarina sahady hiatrika fanadinana ny mpianatra. 588 ny isan’ny mpiadina ho an’ny sekoly katolika navondrona tao anatin’ny distrikan’Antanimena.Ilaina ny andrana tahaka izao hitsapana ny fari-pahazain’ny mpiadina sy hanitsiana ny lesoka raha misy izany, hoy ny ray aman-dreny, tonga nanatitra sakafo ny zanany ny antoandro.Hotolorana ny mari-pahaizana CEPE katolika ireo mpianatra tafita tamin’ny andrana, diplaoma tsy mahasolo ny mari-pahaizana omen’ny fanjakana fa manana ny lanjany kosa ho an’ny fampianarana katolika manokana, hoy ny mpiandraikitra ny fanabeazana eny anivon’ny sekoly katolika.Vonjy A. L’article Hanomezana diplaoma manokana: tontosa ny CEPE andrana katolika a été récupéré chez Newsmada.
Tarika Maboto: omena lanja ny famoronana
Maboto, midika ho tovolahy matanjaka na jaolahy eo amin’ny fiainana. Taona 2018, nahita masoandro ny tarika Maboto, tarihan’i Manitra, zanak’Ilaka Centre. Tarika miezaka manajary mozika vaovao amin’ny alalan’ny fampiarahana ny gadona malagasy sy vahiny. Ny gadona « afro beat » ampiarahina amin’ny gadon-kira avy eto Madagasikara, raikipohy vaovaon’ny hira sy ny mozika ampiharin’ny tarika rehefa manajary ireo sanganasany ry zareo.Nomarihan’i Manitra fa « ezahana hatrany ny hamorona hira mirakitra hafatra izay miendrika fananarana sahaza ny isam-batan’olona ». Nanosika azy ireo hanambatra ny « afro beat » amin’ny bankira malagasy ihany koa ny fanandratana ny maha Malagasy amin’ny alalan’ny hira manerana ny vazantany sy hatrany Dilambato.Ireo trangam-piaraha-monina etsy sy eroa no akora fototra ampiasain’ny tarika Maboto. Vokany, misandrahaka amin’ny lafim-piainana maro ireo tononkirany. Anisan’ireny ny fitiavana, ny maha sarobidy ny Reny, sns. « I Ando sy i Herman izay mpandihy eo anivon’ny Maboto no miketrika ireo soradihy. Tsy misy, araka izany, ny fakana tahaka fa ny asa famoronana no ampanjakaina hatrany », hoy izy.Manana efitrano fandraisam-peo azy manokana ihany koa ny tarika izay manamora ny fomba fiasan’izy ireo. Ampahany amin’ireo vazon’ny Maboto efa be mpankafy ny « Tsy mavozo misaraky », ny « Tiako ny zanakao », fampiarahana ny « afro beat » amina ban-kira avy eto an-toerana. Fantatra fa tsy ho ela ny hivoahan’ny vazo vaovao be !Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article Tarika Maboto: omena lanja ny famoronana a été récupéré chez Newsmada.
Mananara Avaratra, Soanierana Ivongo,… : Vita ny tetezana, hamboarina ny lalana RN 5
Hatry ny ela ny niandrasan’ny mponina sy ny mpampiasa ny hanarenana ny lalam-pirenena RN 5. Hihazakazaka ny fandrosoana raha tanteraka tokoa izany.Nijery ifotony ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy (RN 5) any Fenoarivo Atsinanana, omaly, ny filoha Rajoelina Andry. Nambarany fa hamboarina ny lalana Foulpointe sy i Fenoarivo Atsinanana (43 km), ny mampitohy an’i Ma­na­nara Avaratra sy i Ma­roantsetra, ny Soanierana Ivo­ngo hatrany Ivohibe. Tsia­hi­vina fa efa mandeha ny asa fanamboarana ny miainga eo Toamasina hatreo Foulpointe. Raha jerena ny zava-bita, miisa 18 ny tetezana sy «dalot» iray vita tanteraka. Manohana vola ny fanjakana malagasy ny asa ny Vondrona eoropeanina (UE), mitentina 13 tapitrisa euros. Mian­drai­kitra ny fanatanterahana ny asa tany Mananara Avaratra ny antokon-draharaha Agence routière, natao tamin’ny alalan’ny asa tana-maro. Nahafaly ny vahoaka izany satria nanome asa ho azy ireo.Manana otrikarena matanjaka Zava-dehibe ho an’ny mponina tokoa ny hanamboarana haingana ity lalam-pirenena RN 5 ity. Efa vita godirao, saingy ratsy ny Fenoarivo Atsinanana hatrany Soani­erana Ivongo. Tena andrasana ny fanaovana godirao ny eo Soanierana Ivongo hatrany Mananara Avaratra (120 km), sy indrindra, ny Mananara Avaratra hatrany Maroantsetra (108 km). Raha vita ireo, ho haingana ny fampandrosoana satria manana otrikarena ma­tanjaka iny faritra iny, raha tsy hilaza afa-tsy ny lavanila sy ny jirofo.Njaka AndriantefiarinesyL’article Mananara Avaratra, Soanierana Ivongo,… : Vita ny tetezana, hamboarina ny lalana RN 5 a été récupéré chez Newsmada.
CNAPS-BOA: Hahazo tolotra manokana ireo mpandray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra
Olana lehibe hitarainan’ireo mpikambana ao amin’ny CNAPS ny filaharana lavabe sy maharitra rehefa handray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra. Ho fitsinjovana ireo mpandray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra dia mahazo tolotra manokana izy ireo noho ny fiarahamiasan’ny CNAPS sy ny BOA. Ny 12 novambra 2020 teny Ampefiloha no niroso tamin’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa ny Tale jeneralin’ny CNAPS, Rakotondraibe Mamy sy ny Tale jeneralin’ny BOA Madagascar Othmane Alaoui. “Fantatsika fa misy ny olana. Ao anatin’ny taona iray dia mandeha eny amin’ny banky sy ny orinasa mpampindram-bola mandinika ireo mpandray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra maka ny volany kanefa milahatra. Nanome tolotra manokana ho azy ireo ny BOA, kaonty tahiry tsy andoavam-bola kanefa afaka maka ny volany any amin’ireo masoivohon’ny BOA miisa 94 ireo mpisotro ronono sy mpandray vidin-takaitra. Arotsakin’ny CNAPS ao amin’io kaonty io ny volan’izy ireo. Anisany hampihena ny filaharana ataon’ireo ray aman-drenintsika izany”, hoy ny Tale jeneralin’ny CNAPS. Araka ny fanazavan’ny talen’ny seraseran’ny CNAPS, Ratsimbaharison Alain fa an-tsitrapo ny fidirana amin’io tolotra io. “Rehefa mipetraka elaela ao ny vola dia mitombo”, hoy izy nanazava ny tombontsoa amin’ny fampiasana ity tolotra ity. Nilaza izy fa tsy misy vola aloan’ny mpikambana fa efa nalefahan’ny BOA ny sarany ka ny CNAPS no mandoa izany. Raha mila fanazavana fanampiny kosa dia mila manatona eny amin’ny biraon’ny CNAPS na eny amin’ireo masoivoho BOA. “Noho ity fiarahamiasa ity dia anarivony ireo mpandray fisotroan-dronono no afaka misitraka ny tolotra omen’ny BOA. Anisany tanjon’ny fiarahamiasa ihany koa ny fanampiana ny olona hampiasa ny banky sy ny fanamorana ny fahafahana misitraka ny tolon-draharaha ara-bola”, hoy ny Tale jeneralin’ny BOA. Marihina fa 50.000 ny mpikambana mpandray fisotroan-dronono amin’ny CNAPS ary 5000 ny mpandray vidin-takaitra. Lynda A. Cet article CNAPS-BOA: Hahazo tolotra manokana ireo mpandray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article CNAPS-BOA: Hahazo tolotra manokana ireo mpandray fisotroan-dronono sy vidin-takaitra a été récupéré chez Délire Madagascar.